यो घोडा कारभित्र कसरी पस्यो? रोचक भिडियो हेर्नुहोस् – Sidha Onlinepatra
देउबा सरकारले घटायो ग्यास को मुल्ले हेर्नुस कति पुग्यो
‘गजेडी’ पारस शाहलाई कारवाही नगरे मेरो नेतृत्वमा पक्राउ गरेर प्रहरीकोमा पुर्याउँछुः आङकाजि शेर्पा (भिडियोसहित)
के सविनजंगसँगको ब्रेकअपपछि अर्कै युवको प्रेममा छिन् वर्षा ?
पारस शाहले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ? थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
कस्तो रहला तपाईको आइतबार? पाथिभारा माताको दर्शन गरि साउन १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
श्रीमानलाइ सँगै सुत्न र खाना पकाएर नखुवाउने श्रीमतीलाई ६ वर्ष जेल
खगेन्द्र संग्रौला भन्छन- रवीन्द्र मिश्रको कुरा सुनेर पूर्वयुवराज पारस फु’र्केछन् !
राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष गर्दै नयाँ दल घोषणा, पारशको छोरालाई राज्यप्रमुख बनाइने
भारतीय सेनाका यिनै जवान हुन् नेपाली चढेको महाकालीको तुइन का ट्ने? नदिमा खसेर जयसिंहको मृत्यु भएपछि भारतीय सेनासँग नेपाली रिसाए
मुख्य पृष्ठ /Video/यो घोडा कारभित्र कसरी पस्यो? रोचक भिडियो हेर्नुहोस्
कहिले काँही अनौठो घटना हुने गर्दछ । यस्तै एक घटनामा कारसँग जुधेपछि एक घोडा कारमा अड्किएको थियो । तस्बिरमा देखिएअनुसार घोडाको शरीर कारभित्र छ । त्यसको शिर भने झ्यालबाट बाहिर निस्किएको छ । प्रहरीहरु कसरी यस्तो दुर्घटना भयो भनेर आश्चर्यमा परेका थिए । घोडा कारसँग जुधेपछि नै त्यो कारमा अड्किएको थियो ।
कारका ड्राइभर रान्चारो भने यस दुर्घटनाबाट बच्न सफल भएका छन् । घोडा कारमा जुधेको समयमा ड्राइभर कार छाडेर भा गे को जनाइएको छ। अमेरिका शासित एक टापू प्युरेटो रिको को आपताकालिन सेवाले दुर्घटना भएको केही समयपछि उक्त घोडाको उद्धार गरेको थियो । घोडामा चोट लागेको जनाइएको थियो ।
यो दुर्घटनाको प्रकृति साह्रै अचम्मको भएको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले सामाजिक सन्जालमा बताएका थिए । घोडा मालिक माचितो स्वीङले कारमा भएको क्षतिको रकम व्यहारेको जनाइएको छ । घोडाको घाउ खर्च भने सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताले एक अभियान संचालन गर्दै उठाएका थिए । यो भिडियो यस्तै प्रकृतिको हो, तर यो भिडियो भने भारतको हो ।
गोविन्द शाहीको श’व निकाल्दा हात भा’चिएको, टा ‘उको आ खाँमा कु’टेर मा ‘रे को प्रष्ट हुन्छ (भिडियो) सहित पुरा हेर्नुहोस
चर्चित युट्युबर सन्तोष देउजाकी छोरीलाई के भयो यस्तो ?
अनिता र छोरी यसरी रमाइलो गर्दै ,आहा आमा-छोरिको माया (हेर्नुस् भिडियो)
नेपालमै टिकटकबाट महिनाको २ लाख भन्दा बढी कमाउने युवा, तपाइले नि यसरि कमाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस सजिलो तरिका सहित
प्रेम विवाह गरेको ५ महिनामा पेटको बच्चा मार्न भिनाजुले द-वाई खुवायो र परिवारले नै श्रीमान भगायो